Baolina kitra: nahazo 1 tapitrisa Ar avy ny mpilalaon’ny Barea | NewsMada
Baolina kitra: nahazo 1 tapitrisa Ar avy ny mpilalaon’ny Barea
Par Taratra sur 28/07/2017
Nigadona an-tanindrazana ny talata 25 jolay lasa teo ny Barean’i Madagasikara, avy natrika ny lalao tany Mozambika. Noraisin’ny Federasion’ny baolina kitra (FMF) izy ireo ary notolorana fankasitrahana ireo mpilalao.
Samy notoloran’ny FMF vola iray tapitrisa Ar avy ireo mpilalao avy nandrandro lalao tatsy Mozambika ny herinandro teo. Tafiditra amin’ny fifanintsanana amin’ny “Chan 2018”, hatao any Kenya amin’ny taona ho avy izany izany lalao izany ka nandresentsika 2 no ho 0 ny Mambas. Nankasitrahan’ny mpitantana ny baolina kitra, notarihin’ny filoha amperinasan’ny FMF, Andriamiasasoa Doda izy ireo tamin’izany ary izao nomena fankaherezana teny Isoraka izao.
Ankoatra izany, miantso ny rehetra amin’ny fanohanana ny Barea ilay mpilalao matihanina, Faneva Imma any Frantsa, amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera. Anisan’ny tolo-keviny amin’izany ny fanentanana ny rehetra hividy ny fanamian’ny ekipam-pirenentsika. Fomba efa fanao any ivelany rahateo ny tahaka izany.
Tokony hahay hanohana ny rehetra
Tsiahivina fa niakatra hatrany ny lentan’ny baolina kitra eto amintsika tao anatin’ny herintaona izao. Izany hoe, nanomboka ny 3 septambra 2016 noho mankaty. Nahavita lalao iraisam-pirenena miisa 11. Nahazo fandresena imbalo ary ady sahala telo.
Manoloana izany, tokony hahay hanohana sy hanampy ny Barea ny rehetra, fa tsy hamerina na hanao toy ny niatrehan’izy ireo ny Mozambikanina tetsy Mahamasina farany teo. Nanaraby sy nihorakoraka ny hadisoan’ny mpilalao na ny tsy fetezana eny ambony kianja… Tokony hahay hijery baolina… Tsy ho sakaizan’ny mpandresy foana koa anefa satria boribory ny baolina.